Home STARS EUROPEAN Laurent Koscielny tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pahaterahana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny jeneraly mitongilana izay fantatra amin'ny anarana; "Bosscielny". Ny tantaran-tantaran'i Laurent Koscielny momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga tsy manam-paharoa amin'ny fotoana iatrehany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zavatra maro momba ny OFF sy ON-Pitch (tsy dia fantatra loatra) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny fahaiza-manaony miaro ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mihevitra ny tantaram-piainan'i Laurent Koscielny izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Laurent Koscielny tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Laurent Koscielny dia teraka tamin'ny andro 10tio ny volana 1985 tao Tulle, tanàna fahatelo lehibe indrindra ao amin'ny faritr'i Limousin ao Frantsa ary toerana diso ho an'ny baolina kitra, miaraka amin'ny fepetra henjana manohitra ny olom-pireneny. Laurent Koscielny dia teraka ho an-dRamatoa Bernarda Koscielny izay miara-mitana ny zom-pirenena poloney miaraka amin'ny zanany lahy.
Nihalehibe tao amin'ny fianakaviana mpitrandraka tao Tulle, tanàna iray any afovoan'i Frantsa, i Laurent izay mamarana ny fahabangana rehefa misy baolina amin'ny tongotra iray. Ny tantaram-pianakaviany dia mahaliana, raha tsy mahalana - ny an'ny zazalahy kely misy lavaka fananganana tantara izay nahazo tombontsoa tamin'ny talenta mahatalanjona. Laurent Nandritra ny fahazazany, dia nanana fanapahan-kevitra hentitra izy mba hanatanterahana ny nofinofiny. Ny faniriany dia tsy fanehoana fotsiny. Ny endrik'i Laurent ho an'ny baolina dia tonga, noho ny zokiny lahy izay nifamatotra saingy tsy nanao izany mihitsy.
Amin'ny teniny ..."Ny hoe filalao ho mpilalao baolina matihanina dia nofinofisina fotsiny, karazam-pihetseham-po fantatry ny ankizy rehetra izay azoko atao. Tamin'io fotoana io, ny hany zavatra nieritreretako dia ny hilalao baolina, hilalao ary hilalao indray. Mifaly amin'ny tenako aho, miaraka amin'ny namako ary mizara fotoana miarahana amin'izy ireo. Ny fandefasana baolina kitra dia tena nanahiran-tsaina ahy, toy ny ankamaroan'ny ankizy amin'ny taonako.
Laurent Koscielny tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Karohy amin'ny famintinana
Nanomboka ny asany tao amin'ny 2004 niaraka tamin'i Guingamp i Laurent, ekipa iray namokatra talenta toy izany Didier Drogba ary Florent Malouda. Nanomboka ny asany matihanina ho toy ny tanany havanana izy ary vao telo taona monja talohan'ny naha-hery azy no noraisiny. Nampiasa asa, fahafoizan-tena, ary fahasahiranana i Laurent, ka nitarika azy ho mpandresy tao amin'ny ekipa zokiny tao Guingamp izy ary nihemotra ho amin'ny fihodinana farany. Raha vao 18 taona i Laurent, dia nanomboka nanangom-bola izy mba hanomezana ny tenako sy ny fianakaviako. Nifindra tany amin'ny Ligy Frantsay izy taorian'io raha nilalao ho an'ny Tours sy Lorient izy, ary nanampy tamin'ny fandefasana ny fampiroboroboana ny baolina fandaka frantsay voalohany.
Izany no fiarovana mahery vaika nataon'i Laurent izay nahasarika an'i Arsenal izay nanamafy ny sonia ny 7 Jolay 2010. Ny birao fandatsaham-barotra tao Arsenal dia nanidy ny fifanarahana, saingy i Arsene Wenger dia tsy afaka nanome fankatoavana farany satria tany Afrika Atsimo ary nandao ny findainy tao an-trano. Izany no fotoana i Koscielny nahatonga ny firongatry ny gazety Frantsay nitatitra fa nanohy nampiofana niaraka tamin'ireo mpiara-migadra tao Arsenal izy raha tsy nisy ny filazana fampitaovana ary ny famotsorana an'i Wenger. Vita farany izy ary natolony ny laharana 6 ny klioba, izay notarihin'i Philippe Senderos, izay nifindra tany Fulham.
Laurent Koscielny tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Relationship Life
Misy ny filazana fa ny asa rehetra tsara dia mila ny olona marina amin'ny toerana mety sy amin'ny fotoana mety. Azo antoka fa ny fiainan'i Laurent Koscielny dia manana fiainana tsy manadino izay novolavolain'ny hatsarana sy Claire Beaudouin, ankizivavy efa ela.
Samy nanambady ny roa tamin'ireo mpankafy tamin'ny taona 2015 niaraka tamin'ny ekipa mpilalao Arsenal sy Frantsay maromaro nanatrika.
Na dia liana kokoa aza ny gazety frantsay Raphael Varane's fampakaram-bady izay nitranga tamin'io andro io. Koscielny dia tsy namela ny gazety Frantsay haka sary ny fampakaram-bady. Azontsika atao ny mihevitra fa ny fikasan'i Koscielny hivarotra ny sarin'izy ireo ho isan'ny vitsivitsy izay nalefa an-tserasera dia avy amin'ny vadin'i Bacary Sagna Ludivine.
Laurent sy Claire dia manan-janaka roa mahafinaritra amin'ny anarana; Maina sy Noah Koscielny hita sary etsy ambany miaraka amin'ny rainy. "Nanampy ahy handroso eo amin'ny fiainana ny zanako". hoy i Laurent.
Taorian'ny fampiofanana azony, i Laurent dia te-handeha haka ny zanany any an-tsekoly ary hijery azy ireo mandra-pahatongan'ny faran'ny tolakandro rehefa miverina miasa ny vadiny.
Laurent Koscielny tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fianakaviana
Nanomboka niaraka tamin'ny fianakaviany ny polisy Koscielny. Nifindra tany Frantsa Avaratra izy mba hiasa ho mpitrandraka poloney. Mampalahelo fa tsy ela izy sy ny fianakaviany hafa dia namoy ny fiteny Poloney sy ny fakany.
Ny rain'i Laurent dia nandray anjara tamin'ny fizarana fahaefatra tamin'ny baolina kitra frantsay ho an'ny klioba maro talohan'ny naha mpitantana azy. Koscielny dia nisaotra an'i Bernard rainy, noho izy nitazona azy tetỳ an-tany ary nanampy azy hahatsiaro foana ny toerana nalehany sy ny tokony hijanonany amin'ny fakany. Ny rainy dia tombony lehibe ho azy Ny olona iray izay nahatakatra tsara ny tontolon'ny baolina kitra. As Koscielny mametraka izany, ..."Fantany izay mety hitranga raha tsy mitazona ny tongotro aho. Soa ihany, nitazona ahy foana izy ary nijanona foana mba hanoro ahy ny safidy tiako hatao. Heveriko fa tena tsara vintana aho. Nahazo fampianarana tsara aho, na tamin'ny ray aman-dreniko na ny iray tam-po amiko. Nampianatra ahy fitsipika manan-danja izy rehetra. Ary ankehitriny, anjarako ny mampita izany amin'ny zanako. "
Ny renin'i Laurent Koscielny dia teo anilany foana mba hanome fanohanana ny reny. Ary mbola amin'izao fotoana izao, tena misy izy eo amin'ny fiainany. Araka izay ametrahany azy: "Izy dia sady olona manana ny maha-izy azy hatrany amin'ny fiainako sy ny fiainako: anjely mpiambina". Manana rahalahy mpilalao baolina kitra izy izay 10 taona efa antitra noho izy, ary nilalao tamin'ny ligy amiraly.
Laurent Koscielny tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fiainana manokana
Laurent Koscielny dia manana ny toetoetran'ity toetra ity.
Laurent Strengths: Izy dia tsy mivadika (ny klioba sy ny mpivady), voatahiry, mandalina, miasa mafy ary tena azo ampiharina.
Ny Fahalemen'i Laurent: Ny fahatsaran-tarehy, dia mety ho sahiran-tsaina amin'ny zavatra, manakiana ny tenany amin'ny hafa sy ny hafa ary ny asa rehetra ary tsy misy olona milalao.
Inona no tian'i Laurent: Tiany ny biby, sakafo mahasalama, boky, ny natiora ary ny fahadiovana ankapobeny.
Inona no tsy tian'i Laurent: Fahamendrehana, mangataka fanampiana ary maka ivon-toerana.
Laurent dia olona iray izay mandinika ny tsipiriany madinika indrindra ary ny fahatsapany ny maha-olombelona dia mahatonga azy ho iray amin'ny olona be fiahiana indrindra izay mbola ho fantatrao. Ny fomba fiaina metodista amin'ny fiainana dia miantoka fa tsy misy na inona na inona azo atao. Laurent dia olona izay mety tsy ho takatra matetika, fa tsy noho ny tsy fahafahany maneho azy, fa noho izy tsy manaiky ny fihetseham-pony ho marina, marina, na dia manan-danja aza raha mifanohitra amin'ny antony.
Laurent Koscielny tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -namana
Ny fiantombohan 'ny asan' ny toeram-piasan 'i Arsenal dia tsy dia malama. Na dia izany aza dia tsy naharitra ela izany Arsene Wenger dia nanjary tia ny fahaiza-manaony ara-batana ary hatramin'izao, i Laurent dia nahazatra ny tenany tamin'ny tale lefitra.
Laurent Koscielny tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fivoriana Q & A
Namaly fanontaniana sasantsasany izay tokony ho fantatra i Laurent. Ireto manaraka ireto dia fanontaniana sy valiny.
Iza no mpilalao henjana indrindra izay tsy maintsy niatrika taminao?
Drogba, tsy misalasala.
Aiza / izay Lalao no nahatsapanao ny tsy fitovizanao lehibe indrindra?
Ny farany amin'ny Euro ao Frantsa. Fotoan-tsarotra ho antsika izany. Satria zava-nitranga izay niandry tany Frantsa. Heveriko fa fahombiazana izany tamin'ny ankapobeny, saingy tena naharary ny fiafaràny faharesena. Misy hatrany ny fahatsapana mangirifirina amin'ny fanararaotana ny tranga tahaka izao.
Rehefa Miala sasatra eny an-kianja ianao, inona no eritreretinao?
Rehefa mivoaka eny an-kianja aho dia tsy mieritreritra be loatra momba izany, raha vao vita ny fombafomba amin'ny tanana, miezaka mifantoka amin'ny lalao aho ary amin'ny lalao fotsiny ihany, mba hampahatsiahy ny zavatra tokony ataoko mandritra ny lalao, manandrana manome ny tsara indrindra amin'ny ekipako aho, mba hanana ny vokatra tsara indrindra.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaranay momba ny tantaram-pianakaviana Laurent Koscielny momba ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
vannyhenrico - Febroary 16, 2020
vannyhenrico - Febroary 15, 2020 0
Tanguy Ndombele Fitiavana ny Tantara momba ny Ankizy Fa Taiza Marina Momba Ny Tantaram-piainana